“Dhibaatada ugu wayn ee heysata Ronaldo waa Messi.”. Xavi – Gool FM
Byare May 2, 2017
(Europe) 02 Maajo 2017. Kubbad qaabeeyihii hore ee Barcelona Xavi ayaa ammaan kala dul dhacay Cristiano Ronaldo balse wuxuu qabaa in dhibka ugu badan ee heysta uu yahay Lionel Messi uu ku sheegay inuu yahay kan ugu fiican taariikhda kubbada cagta.
Messi iyo Ronaldo ayaa ku guuleysanayay abaal marinta laacibka ugu fiican adduunka 9-kii sano ee la soo dhaafay, markastana waxaa taagnaa dooda ah keebaa ah laacibka ugu fiican taariikhda.
Xavi oo Camp Nou waqti dheer kula soo ciyaaray Messi ayaa ku ammaanay Ronaldo xiddignimadiisa balse wuxuu sheegay in dhibka heysta uu yahay Messi uu ku tilmaamay kan ugu fiican ebid taariikhda kubbada cagta adduunka.
“Ronaldo waa laacib kubbada cagta oo heer sare ah,” Xavi ayaa sidaa u sheegay Bola TV.
“Dhibka jira ayaa ah inuu meesha joogo Messi, kaa oo aniga ahaan ah laacibka ugu fiican taariikhda.
“Taasi waa dhibaatada kaliya uu qabo Ronaldo. Laakiin waa laacib goolal dhaliya isla markaana sii wada inuu taariikh sameeyo.”.
“Weligeey ma dhalin gool sidan oo kale ah.”. Emre Can
"Real Madrid waa Bayern Munich iyo Barcelona oo la isku dhafay" - Michael Owen